News - grille platform, xayndaabka siligga lagu xiray
Shabaggeeda steel, FRP shabaggeedii, Welded Birta Warshad
Hebei Weijia MetalMesh Co., Ltd waa cilmi baaris, horumarin, wax soo saar, iibin iyo adeeg ee shirkadaha farsamada sare. Waxaan nahay bir mesh dhaqaajiya ugu horeysay ee Shiinaha.
Waxaan ku leenahay faa iido aad u wanaagsan noocyada kala duwan ee deyrka, sida, xayndaabka xabsiga, xayndaabka garoonka, xayndaabka tareenka, xayndaabka go'doominta; shabaqa birta, mesh birta ah, daah saxanka gidaarka mesh…
* Badeecad sicirka wershaddu bixiso.
* Tayo wanaagsan oo leh shahaadada ISO 9001 ilaa sanadkii 1997.
* Kooxda iibinta Xirfadleyda oo si dhakhso leh ugu jawaabeysa macaamilka 12 saacadood gudahood.
* Alaabooyinka waa la habeyn karaa.
* Astaanta Macaamiisha ee alaabada waa la aqbali karaa
Wax soo saarkayagu magac wanaagsan ayuu ku leeyahay Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa in iskaashiga labada dhinac ee faa'iidada leh iyo saaxiibtinimo ee ku saleysan sameynta xiriir ganacsi oo dhow oo lala yeesho macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha.
Suuqa ugu weyn: Singapore (waxaan ku leenahay halkaas), SaudiArabia, Indonesia, USA, Israel, Australia, South Africa, Mauritius, Morocco, UAE, Portugal, Russia, Malaysia, Bangladesh, iyo wixii la mid ah.
J: Guud ahaan waa 5-10 maalmood haddii alaabtu taallay. ama waa 15-30 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, waa hadba tirada.
J: Bixinta <= 1000USD, 100% ka hor. Bixinta> = 1000USD, 30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor rarka.
S: Miyaad soo saari kartaa sidii sawirkayga?
J: Haa. Waxaan samayn karnaa badeecooyin habaysan.